UGAAR AH DUMARKA: 5 Sifo Oo Lagu Garto Ninka Mustaqbalka kaa rabo - Aayaha
Home/XIRIIRKA IYO GUURKA/UGAAR AH DUMARKA: 5 Sifo Oo Lagu Garto Ninka Mustaqbalka kaa rabo
UGAAR AH DUMARKA: 5 Sifo Oo Lagu Garto Ninka Mustaqbalka kaa rabo
Had iyo jeer haweenka waxay ku riyoodaan sidii mustaqbal ay u dhisan lahaayeen oo ay hooyo u noqon lahaayeen ama caruur ay u dhali lahaayeen.
Shabakada Aayaha, waxay idiin soo gudbineysaa 5 tilmaamood oo aad ku garan karto ninka ku guursan rabo ama mustaqbalka ah.
Markii uu nin kaala hadlo inaad si wadajir ah ama lamaane ah aad wax usameysaan waa tilmaan muujineysa inuu kuu arko qofka mustaqbalka uu la wadaagayo ama inaad xaaskiisa noqo, taasina waxay tilmaan wanaagsan oo kuu muujineysa in maalmihii qurxoonaa ay soo socdaan waana tilmaan qurux badan.
Waqti ayuu kula qaataa
Waa wax wanaagsan marka uu ninka saaxiibkaa ah waqti kusiiyo waxana kasii wanaagsan marka uu howsha kula qabto isla markaana waqti kula qaato.
Wuukula joogaa xittaa markii ay xaaladda kugu adagtahay
Haddii uu ninka uu kuu dhow yahay marka ay xaaladda kugu adagtahay waa hubaal waa tilmaan muujineysa inaad wax walba uga qiima badantahay marka waa iska caadi in la isla joogo marka ay xaaladda caadi tahay balse xilliyada ay xaaladda adagtahay ninkii ku garab istaaga ee aan kaa dheeraan waxay micneheeda tahay in labadiinaba aad dhib walba kasoo gudbeysaan waana tallaabo wax walba ka qiimo badan.
Si wadajir ah ayaad wax u iibsataan
Haddii ay noqon lahayd adeeg dhar ama guri cusub inaad si wadajir ah wax u iibsataan oo aad wadaagtaan mas’uuliyad micnaheeda waxa uu yahay in xiriirkiina uu noqon doono mid waara ood waaya badan oo qurux badan aad isla qaadan doontaan.
Waxaad kamid tahay qoyskiisa
Haddii xiriirkaaga uu gaaro heerkaas oo aad kasoo muuqato marka ay qoyskiisa isku imaanayaan ama aad hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalihiis aad la kulantid waxaad kamid tahay qoyskiisa oo xiriirkiina wax walbo wuuka soo gudbay.
6 Waxyaabood Oo Macaan Oo Lamaanahaagu Jeclaan Lahaa Inuu Kaa Maqlo
5 Weedhood Oo Ka Cajiibsan “Waanku Jeclahay”
5 Waxyaabood Oo Haweeneydu Sameyso Marka Ay Ku Nacdo (Calaamadahan Waa Digniin)
3 ways a woman can flirt with her husband
Haweeney Da’da 74 Sano Ku Dhashay Ilmo Mataano Ah (Daawo Sawirrada)
Diyaarad rakaabku ay ka raacayaan baalasha oo la soo saarayo (Daawo Sawirrada)
3 Sababood Oo Aad Iskaga Xireyso Baraha Bulshada Ninkaad Horey U Kala Tagteen
Aalad Casri ah oo kaa caawinaysa inaadan ku dhicin Imtixaanka oo Muqdisho laga soo saaray
Hafuus Cabdullahi oo ah gabadhii Aabeheed siisay qeyb kamid ah beerkeeda oo isbitaalka kasoo baxday (Akhri)